6 qarsoon oo qurux badan oo Masar laga keenay - Afrikhepri Fondation
6 qarsoon oo qurux badan oo Masar laga keenay
Saliid Nigella: Gaashaan difaac ah.
Nigella, sidoo kale loo yaqaano saliid Farrisiin yahay madow ama Fircoon (oo waxaan ka helay weel qabrigii Tutankhamun) waa warshad kaymo leedahay beduliyum dalal badan oo Bariga. Taas oo ah Masar waa tan ugu caansan ee tayada macaan. saliid ka soo miraha laga soo saaro waxaa dhaqan ahaan loo isticmaalo wanaagga badan maqaarka aalkolada, anti-bararka, anti-fangas, anti-xasaasiyad ... saliidda Tani waxay sidoo kale ku jira vitamin E (antioxidant dabiiciga ah), carotenoids (lidka xagasha) iyo macdanta (birta, fosfooraska).
EvadéSens ayaa abuuray daryeelka line a for maqaarka qalalan (serum, maaskaro cream) in isku daraa saliidda Nigella, biyaha ubaxa, saliidaha lagama maarmaanka ah, Butters oo iswayneeya in wada tashi nafaqada kaamilka iyo cusboonaysiinta hargahood oo qoto dheer qalalan oo jilicsan.
Waxyaabaha ka soo horjeeda gabayga dameerka.
Aad hodan ku vitamins (A, B1, B2, B12, C, D, E), acids amino, macdanta iyo raad raaco canaasirta (calcium, magnesium, fosfooraska, iyo birta, zinc), acids dufan dufannada (omega-3 iyo -6), protein, caanaha dameer waa daaweyn gaar ah, nasteexo, fuuq iyo nafaqo leh. Waxaa loo adeegsadaa daaweynta quruxda ilaa tan hore, waxaa si gaar ah u si fiican u dulqaatay dhamaan noocyada maqaarka, xitaa kuwa ugu nugul waana ku fiican yahay maqaarka qalalan, xanaaqa iyo reactive. Tansor-ka iyo saameynta dib-u-dhiska ayaa sidoo kale lagu qiimeeyaa daaweynta da 'yarta.
Caanaha qaaliga ah ee dameerka ah waa lyophilized (qallajis heerkulka oo hooseeya) in lagu daro kookhasyada (kiriimyada, caanaha jidhka) ama lagu daro saabuunta geedi socodka qabowga qabow.
Cunto Masraxa ah ee Masaarida: 100% macmacaanka caadiga ah ee dabiiciga ah.
A multi-isticmaalka beeyo dabiiciga ah ku salaysan dibinta (huurka, Faydi isha qurxiyo, daryeelka cuticle, labeenta dibnaha, daaweynta canbaarta oo psoriasis, gubto, daryeelka timaha) in dhalaalayaa xiriir la maqaarka inuu ka soo leexdo galay saliidda oo leh nafaqo iyo nafaqo.
Gebi dabiiciga ah, waxaa la sameeyey lix maaddooyinka huurka (saliid saytuun ah, Beeswax, malab, manka shinnida, jelly boqornimada, propolis) muddo ka badan 20 sano oo dalka Mareykanka ah. Isku dar ah ee maaddooyinka kuwaas waxaa loo sameeyaa iyadoo la isticmaalayo habka shatiga, ku salaysan prétenduement a formula abuuray waxaa kumanaan sano oo dalka reer Fircoon ka. Marka laga soo tago koox yar baruurta iyo baakadaha: jaraa'id quruxda iyo dadka (Kate Hudson, Oprah Winfrey, Eva Longoria Gisele Buntchen ...) waa taageerayaasha alaabtan !
Fiiro gaar ah oo ay la socoto khadka.
Kohl waa budada macdanta madow oo horay uga sameysay isku dar ah lead, baaruud, xayawaan iyo xaabo guban. Waxaa loo isticmaalay in la sameeyo iyo / ama la daaweeyo indhaha ragga iyo dumarka. Nasiib wanaag, walxaha sunta ah ma aha kuwo ku qoran liistada maaddooyinka. Khôl waxaa laga dalbadaa geeska indhaha iyo isha kuxirta adigoo isticmaalaya ul dhirta loo yaqaan mirwed. Hadda waxaanu helnaa qalabka qalin-qoraalka ah.
Waxyaabaha loo yaqaan "exofoliation" ayaa u mahadnaqa Loofah.
Loofah waa dhagax ku koraya Masar. Kadib markuu korayo sagaal bilood, miraha ayaa la nadiifiyaa oo la qalajiyaa. Waxyaabaha fayoobaanta leh ee loogu talagalay daryeelka jidhka ayaa loo yaqaan tan iyo wakhtiyadii hore. Waxyaabaha laga sameeyay jilicsanaan, jilicsan oo qallafsan oo jilicsan marka qoyan, loofah ayaa ku habboon loogu talagalay maaddada "exfoliation". Qalabayn, waxaa loo isticmaali karaa dhowr jeer toddobaadkii ee qubeyska. Waxay ka baxaysaa maqaarka jilicsan, oo ay ku qabato kiriimyada iyo firfircoonida firfircoon. Micromassage waxay kicisaa wareegga dhiigga waxayna hagaajisaa xajinta maqaarka. Waxay ka hortagtaa timaha lafaha leh.
In machadka: daaweynta boqortooyada - Masaarida Masaarida Masaarida.
Macaashka boqoradda waa farsamooyin masawirro ah oo ay waxyaabihii Masar hore u soo baratay oo ay wax ku baratay Academy Agaasimaha Massage. Waxaa jira xoog leh calaamad in farsamooyinkooda sida Qorraxda oo soo Muuqata ama wareegyada dabka, laakiin sidoo kale qeyb ka waxyoonay by qaab naturalistic la dagaaleed ee abeesadii (Uraus), qaniinyada of yaxaaska (Sobek), cidida cat ee ( Bastet) halka ixtiraamaya xeerarka diinta iyo farshaxanka tusaale ah la waddo waa sida munaaraddii macbudka, Ahraamta weyn ama obelisk. massage Masar waa massage dhamaystiran (isku xigxiga oo ka mid ah waddo badan 100) sababtoo ah waa farsamo ah in uu yahay nasasho iyo bi'adda. Waxay ka dhexjiraysaa tamarta jidhka iyada oo hubinaysa in wareegga dheecaanka iyo wareegga joogtada ah. Waxay u ogolaanaysaa in ay ka joojiso sunta jirka ka yimaada iyada oo la marinayo qubeyska iyo rinjiyeynta.
Muuqaalka muusikada la yaabka leh, dhaqanka Miisaanka Masaarida sidoo kale wuxuu ku tiirsan yahay xayawaanka ubaxa leh ee aroosadda iyo aromaterapy: jasmine, mimosa, kor; ubax badan, sandalwood ...
6 tilmaamood oo runtii noqoshada waalid wanaagsan
Sadhguru wuxuu ka hadlayaa coronavirus: caqabad iyo fursad
Qalabka wuxuu ka kooban yahay nidaam madax-xannuunsan iyo 40 000 neurons
Xalka khilaafaadka raga iyo dumarka